Jereo ny morontsirak'ireo katedraly ao Lugo | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | tora-pasika
La Playa de las Catedrales dia efa malaza amin'ny famolavolana vatolampy, sokajiana ho iray amin'ireo tsara tarehy indrindra any Espana. Ny lazany dia nitombo be, ka maro ny olona tonga isan-taona mba hahita ity morontsiraka mahafinaritra ity, izay misy mampiavaka azy manokana. Fitsidihana mahafinaritra tokoa, satria heverina ho tsangambato voajanahary misy lanja lehibe ary satria tsara tarehy koa ny manodidina.
Ity iray ity amoron-tsiraka dia any avaratry Espana, ao amin'ny vondrom-piarahamonina mahaleo tena ao Galicia, manokana ao amin'ny faritanin'i Lugo. Ity faritany ity dia tsy manana faritra amoron-tsiraka any avaratra, izay misy an'io morontsiraka malaza io. Hahafantatra bebe kokoa momba izany sy ireo torohevitra hitsidika azy isika.
1 Aiza ny morontsirak'ireo katedraly
2 Ahoana no ahatongavana amin'ny moron-dranomasina
3 Serivisy eny amoron-dranomasina
4 Tapakilan'ny morontsiraka
5 Curiosities amin'ny morontsiraka
6 Fitsidihana ny morontsiraka
7 Jereo ny manodidina
Aiza ny morontsirak'ireo katedraly
Ity morontsiraka ity dia miorina eo amin'ny fantatra amin'ny anarana hoe Mariña Lucense, izay morontsiraky ny faritanin'i Lugo, miorina amin'ny faritra avaratra misy azy, manoloana ny ranomasina Cantabrian. Ny morontsiraka dia ao anatin'ny filankevitr'i Ribadeo, misy azy. Ity toerana ity dia fantatra fa mifanila amin'ny Principality of Asturias. Ny moron-dranomasina dia mitokana amin'ny ivon-tanàna, amin'ny faritra voahodidin'ny habaka voajanahary, ka mahatonga azy ho tsara tarehy kokoa.
Ahoana no ahatongavana amin'ny moron-dranomasina
Raha hitsidika ny moron-dranomasina isika dia afaka mankany toerana afovoany bebe kokoa toa an'i Ribadeo ary mandray ny N-634 hivily any aoriana mankany amin'ny lalana kely kokoa, ny LU-P-5209. Amin'ity toerana ity dia tsara ny mampiasa GPS, na dia misy aza ny famantarana, saingy tsy misy làlana lehibe, araka ny antenaina avy amin'ny toerana fizahan-tany toy izany.
Serivisy eny amoron-dranomasina
Rehefa tonga eo amoron-dranomasina dia hihaona a toerana fijanonana lehibe handao ny fiara. Mila mandeha kely amin'ny lalana maloto ianao ary ho tonga eo am-baravaran'ny morontsiraka isika. Misy trano fisakafoanana any amin'io faritra io saingy araka ny nambarantsika dia mitokana izy io, ka raha handany ny andro isika dia tsara kokoa ny mitondra sakafo sy izay rehetra ilaintsika. Ao amin'ilay faritra dia misy faritra fitsangantsanganana sasany izay misy fahitana miavaka amin'ny ranomasina, noho izany dia mety indrindra ny mihinana amin'ity toerana ity.
Hatramin'ny taona vitsy lasa izay dia malalaka ny fidirana hijery ny moron-dranomasina. Saingy, ny fitomboan'ny fidiran'ny mpizahatany dia nahatonga ny fitantanana hametra ireo fitsidihana ireo hiarovana ny morontsiraka, ny zavamaniry ary ny biby. Amin'izao fotoana izao dia afaka manao famandrihana amin'ny Internet mialoha ianao. Tsy ilaina izany mandritra ny vanim-potoana ambany, satria matetika dia ampy ny fitsidihana, fa avy 1 Jolay ka hatramin'ny 30 septambra dia tsy maintsy atao izany avoahy mialoha ny tapakila. Zava-dehibe ny fahalalana izany mba tsy hahatongavantsika sy hahitantsika fa tsy afaka mitsidika ny morontsiraka isika.
Curiosities amin'ny morontsiraka
Ity morontsiraka ity dia tsy antsoina hoe Playa de las Catedrales, satria fantatry ny rehetra, fa Playa de Aguas Santas no iantsoana azy. Ho fanampin'izay dia ilaina izany fantatry ny onja taloha satria ny fahafahany mitsidika ny moron-dranomasina dia miankina amin'izy ireo. Amin'ny fisondrotan'ny ranomasina dia manjavona tanteraka ity faritra feno fasika ity satria rakotry ny rano. Azo tsidihina ihany izy io rehefa ambany ny onja ary mila mijery tsara ny torolalan'ny mpiambina ianao satria haingana kokoa ny fiovana amin'ny fotoana sasany.
Misy tohatra somary lava iray hidina any amoron-dranomasina. Rehefa misy ny onja mahery, ny dingana farany dia mety ho somary lavitra ny fasika amoron-dranomasina, ka tokony hitandrina ny rehetra, indrindra ireo be taona sy ankizy. Raha vantany vao eny amoron-dranomasina ianao dia afaka mandehandeha eny fa mitadidy foana hoe iza avy ireo faritra tsy azonao aleha ary inona tsy tokony hanelingelina ny biby mihitsy isika inona no eny amoron-dranomasina. Nisy lozam-pifamoivoizana nitranga teny amin'ity morontsiraka ity tsy ela akory izay noho ny vato nianjera, koa mitandrema amin'ireo faritra voafetra.
Fitsidihana ny morontsiraka
Ny fitsidihana ny tora-pasika Catedrales no ampahany tsara indrindra. Azonao atao ny mamakivaky azy io mankafy an'ireny formations rock mahatalanjona ireny izay novolavolain'ny fihetsiky ny rivotra sy ny rano. Hantsana mahavariana izy ireo. Ho fanampin'izay, ianao dia afaka mahita ireo tohana izay mahatadidy ireo vodin-kazo manidina an'ny katedraly, ka izany no anaran'ilay morontsiraka. Misy ihany koa ny lava-bato sy faritra iangonan'ny rano. Ity morontsiraka ity aza dia azo jerena avy any ambony, hatrany amin'ny hantsam-bato, ka ny tolo-kevitra dia ny hamorainao sy hankafizanao ny maka sary tsara tarehy.
Raha manam-potoana aorian'ny fitsidihana ny Playa de las Catedrales isika dia mbola afaka mankafy mahita ny tanànan'ny Ribadeo tsara tarehy. ny Ilay tanàna taloha dia nambara ho fananana tombotsoan'ny kolontsaina, izay misy trano tsara tarehy sy ny trano fiangonana Atalaia taonjato faha-XNUMX. Eto amin'ity toerana ity dia hevitra tsara ihany koa ny mitady trano fisakafoanana hanandramana ny gastronomia Galisiana matsiro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » tora-pasika » Torapasika Cathedrals any Lugo, Galicia
Paradores any Galicia